Biyihii Ceelka Degmada Gunagado Oo Macaan Loo Badalay - Cakaara News
Biyihii Ceelka Degmada Gunagado Oo Macaan Loo Badalay
Gunagado(cakaaranews )Jumce 15ka Aprill 2016, masuuliyiin isugujira heer degmo iyo heer gobol oo uu horkacayo Gudoomiyaha Gobalka jarar mudane Cabdi Cali Mataan ayaa maanta booqasho kutagay ceelka biyaha khadhaadh ee kuyaala Degmada Gunagado. Halkaas oo laga waday sifaynta biyaha khadhaadh loona badalayay biyo Macaan.
Hadaba Gudoomiyaha Gobalka jarar mudane Cabdi Cali Mataan oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in kadib markii xafiiska biyaha ee heer deegaan uu soodiray khabiiro iyo mishiinadii lagu sifaynayay biyaha khadhaadh ee ceelasha deegaanka ay maanta sifayntii biyaha khadhaadh ee ceelka degmada gunagado ka bilaabeen islamarkaana ay biyihii khadhaadha u badaleen biyo macaan oo nadiif ah. Wuxuuna intaa kudaray Gudoomiyuhu in sifaynta biyaha ee mushiinadani ay 1kii saac ee kastaba ay macaan u badalayaan cadad biyo ah oo dhan 10,000 oo litter oo biyo nadiif ah.
dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa tilmaamay in shacabka ree gunagado ay aad ugu farxeen macaanaynta biyihii khadhadhaa islamarkaana ay aad ugu mahadcelinayaan xukuumada DDSI iyagoo shacabakuna sheegay in madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu hada kahor ka balan qaaday shacabka degmada Gunagado in biyaha khadhaadh ee ceelka macaan looga dhigi doono.
Sikastaba ha ahaatee qorshahan biyaha khadhaadh loogu badalayo biyo macaan ayaa ah mid kamida qorshayaasha dhanka biyaha ah ee loogu yeedho (water solution) taasoo larabo in dhamaan lagaadhsiiyo ceelasha khadhaadh ee deegaanka.